Sidina avy any Doha mankany Medina, Arabia Saodita amin'ny Qatar Airways izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina avy any Doha mankany Medina, Arabia Saodita amin'ny Qatar Airways izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • Vaovao farany momba ny Qatar • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny famerenana ny serivisy dia ahafahan'ny mpandeha misidina avy any Medina hankafy fifandraisana tsy misy tohika amin'ireo toerana 140 mihoatra ny tambajotram-pifandraisana manerantany ao Azia, Afrika, Eoropa ary Amerika amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Doha Hamad.
Ny sidina Qatar Airways dia ho entin'ny Airbus A320 manolotra seza 12 ao amin'ny Kilasy Voalohany sy seza 132 amin'ny kilasy toekarena.
Ireo mpandeha manidina avy any Medina dia handray soa amin'ny tambajotram-pifandraisana iraisam-pirenena manerana an'i Azia, Afrika, Eropa ary Amerika.
Qatar Airways faly manambara fa hanohy ny serivisy ho an'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Prince Mohammed Bin Abdulaziz, Medina manomboka amin'ny 1 Oktobra 2021 miaraka amin'ny sidina efatra isan-kerinandro. Ny serivisy Medina dia hiasan'ny Airbus A320 an'ny fanjakana tsara indrindra izay ahitana seza 12 ao amin'ny Kilasy Voalohany sy seza 132 ao amin'ny Kilasy Economy.
Ny famerenana ny serivisy dia ahafahan'ny mpandeha manidina avy any Medina hankafy fifandraisana tsy misy tohika amin'ny toerana 140 mihoatra ny tambajotram-pifandraisana manerantany ao Azia, Afrika, Eoropa ary Amerika amin'ny alàlan'ny Doha Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Hamad.
Qatar Airways sidina QR 1174, hiala ao Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Hamad tamin'ny 01:00, tonga tamin'ny 03:15 nankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Prince Mohammed Bin Abdulaziz. Ny sidina Qatar Airways QR1175, hiala amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Prince Mohammed Bin Abdulaziz amin'ny 04:15, ary tonga ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Hamad amin'ny 06:25.
Manohy manamboatra ny tambajotrany ny kaompaniam-pirenen'i Qatar, izay misy toerana 140 mahery ankehitriny. Qatar Airways dia manasongadina ihany koa ny politika famandrihana tsy miovaova izay manome fanovana tsy voafetra amin'ny daty sy toerana itodiana ary famerenam-bola tsy andoavam-bola ho an'ny tapakila rehetra navoaka ho an'ny dia vita tamin'ny 31 Mey 2022.
Alatsinainy, alarobia, zoma ary alahady (isaky ny toerana rehetra)
Doha (DOH) mankany Medina (MED) QR1174 dia miainga: tonga ny 01:00: 03:15
Medina (MED) mankany Doha (DOH) QR1175 miainga: 04:15 tonga: 06:25